Kheyraadka dalkeena sidee baan u kala dooranaa ? - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Kheyraadka dalkeena sidee baan u kala dooranaa ?
February 10, 2019 February 10, 2019 admin816
Soomaaliya waa dal ilaahay dhexdhigay kheyraadka aduunyadu ku faanto intiisa badan sida Beeraha, xoolaha la dhaqdo, kaluunka, xeebaha dalxiiska, waxa la yiraahdo logistic strategic, kheyraadka dhulka hoostiisa kujiro, iyo qeybo kale oo badan sida cimilada dhexdhexaadka ah ee ilaahay nagu galaday kuna wanaagsan dalxiiska iyo nasashada.
Inta badan kheyraadka ilaahay na milkiyey qeybkastoo ka mid ah haddii aan kaligeed hormarino waxey ku filantahay oo maareynkartaa dhaqaale ahaan baahida dadkeena dhinac walba. Tusaale hadii aan beeraheena ku bixino tamar aan xooga saarno sidii aan u hormarin lahayn uga dhigi lahayn kuwa daboola baahideena raashin isla markaana aan suuq uga raadino aduunyada waxey kufilanyihiin beeraheenu dhamaan baahideena, sidoo kale kaluunkeena haddii aan si fiican u maamulano una hormarino una suuqgeyno wuxuu ku filan yahay baahideena, dhinaca xoolaha hadaad eegto kaba daran dhulkeena intiisa badan waa dhul daaqsimeed halka somalidu ay ka baa bi’i weysay taariikhihii horena waxey ahayd dhaqalaheeda oo ku tiirsanaa xoolaha nool. Hadaba kheyraad keena waxaa wanaagsan in aan u kala saarno laba qeybood
Mid xambaarsan saamayn togan iyo mid xambaarsan saamayn dadban
1 Negative effect
Shiikh Shariif oo mudo ku xayirnaa garoonka diyaaradaha Aaden cadde
September 22, 2019 September 22, 2019 Duceysane